विशेषताहरू - बाल pryadok व्यक्तिगत रंगाई को एउटा तरिका हो। हालैका वर्षहरूमा यो किनभने सबै प्रयास गर्न प्रयास एक महिला को सौन्दर्य को पीछा मा, धेरै लोकप्रिय छ। ताले, केश बाँकी एक फरक रङ, नेत्रहीन केश थप luxuriant र gusche.K साथै, बाल बुनाई बनाउन - यो सिर्फ धेरै सुन्दर। यो staining विधि अरूलाई तिनीहरूको प्राकृतिक रंग राख्ने गर्दा, staining कपाल को एक सानो भाग उजागर रूपमा, अधिक कोमल छ।
एक महिलाले बुनाई बाल बनाउन इच्छा छ जब, प्रश्न उठ्छ: बाहिर प्रक्रिया आफ्नै बोक्न वा कुनै पनि भित्री मा मास्टर गर्न काम सुम्पिन्छु। तपाईं पहिलो विकल्प प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर दाग एक अनुभवी विशेषज्ञ पकड हुनेछ यदि यो राम्रो हुनेछ। एक laborious प्रक्रिया, pryadok महत्त्वपूर्ण painting गर्दा किनभने तिनीहरूले पनि, रंग गर्न देखि, छिमेकी कपाल छुन छैन, र त्यसैले, तपाईंले आफ्नो टाउको के छैन खाली छ हुन सक्छ - तथ्यलाई पनि हाइलाइट गर्ने छ। मास्टर भने - आफ्नो क्षेत्रमा एक पेशेवर, यो तपाईं जोड दिंदै लागि सबैभन्दा उपयुक्त छाया चयन गर्न हुनेछ, यो रंग तयार र सबै टाउको माथि समान रूप अधिक किसिमहरु रंग हुनेछ।
तर आधुनिक महिला सधैं सौंदर्य सैलून पर्याप्त समय छ रूपमा, बाल बुनाई पनि कहिलेकाहीं घरमा के गर्न छ। खराब छैन, कसरी गर्न चिन्ने मित्र त्यहाँ हुँदा, अन्यथा यो केवल तिनीहरूको बल भर हुनेछ।
घर मा बुनाई कसरी बनाउने
धारिलो कलम, एक गिलास प्लेट, पिन, पुरानो तौलिया, पन्जा एक कोर्नु एक ब्रश सही रंग रंग,: पहिलो, तपाईंले आवश्यक सबै तयारी गर्न आवश्यक छ।
आचरण बुनाई कपाल सबैभन्दा ठूलो ऐना अगाडि सुविधाजनक छ।
रंग सामाग्री को निर्देशन मा निर्देशनहरू अनुसार एक ग्लास प्लेट सँगै मिश्रित हुनुपर्छ।
केश राम्रो कोर्नु हुनुपर्दछ, र धेरै क्षेत्रहरु विभाजित र hairpins मजबूत।
, यो भन्दा बढी रंग, विशेषताहरू पछाडिबाट सुरु गर्नुपर्छ कपाल को शीर्ष, पक्ष र अगाडि जानुहोस्।
को चुच्चा अन्त प्रयोग तिमी माथि रंग चाहनुहुन्छ कि बाल को Strand विभाजित छ। ब्रश रंग मा wetted र मा आयोजित डिजाइन प्रदान। रंग गर्न Strand राम्रो पूर्ण रंग ढाकिएको थियो हुनुपर्छ।
यसरी यो बिस्तारै निधारमा गर्न occiput देखि बढ, सबै अन्य किसिमहरु भन्दा रंग गर्न आवश्यक छ। प्रत्येक पङ्क्ति बारेमा 3-5 pryadok रङ लगाइएको र pryadok कपाल को मोटाइ निर्भर संख्या नै हुनुपर्छ।
गर्न streaked किसिमहरु कपाल बाँकी स्पर्श छैन, तिनीहरूले पन्नी मा र्याप गर्न सकिन्छ।
केश मा रंग म छाया प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ के मा निर्भर गर्दछ कायम गर्न कसरी। औसत समय - 20-25 मिनेट।
जब समय समाप्त हुन्छ, केश सम्म यो सबै रंग बन्द धुन नगरेसम्म पानी धोए गर्नुपर्छ। यो पछि बाल कंडीशनर कुल्ला वा बाम कपाल धुनुपर्छ।
को जरा pryadok फिर्ता बढ्न रंगे गर्दा, तपाईं पुन: गर्न आवश्यक
विशेषताहरू। पूर्णतया चित्रित ताले पर्याप्त राख्नु मा रंग गर्न आवश्यक छैन
जरा, तिनीहरूलाई चिल्लो प्राप्त गर्न, अधिक र कोर्नु रंग प्रतीक्षा
आफै Weave गर्छन् धेरै गाह्रो छ: थकित हात, यो सधैं सम्भव सही ढंगले ताले स्थिति छ। तपाईं निम्न सल्लाह गर्न सक्छन्: मोटा किसिमहरु गर्न र तिनीहरूलाई प्रत्येक अन्य टाढा राख्न। र हात कम थकित हुनेछ, र staining सही हुनेछ।
तपाईं खर्च गर्न चाहनुहुन्छ भने रंगा कपाल मा विशेषताहरू, यो कपाल डाई पछि7दिनको न्यूनतम पारित गर्नुपर्छ भनेर सम्झनु पर्छ।
पूर्व चित्रकला समयमा गम्भीर परिणाम जोगिन गर्न, एक एलर्जी प्रतिक्रिया परीक्षण पकड रोक्दैन।
हाइलाइट गर्न सक्नुहुन्न भने टाउको मा घाउ वा त्यहाँ भडकाऊ प्रक्रिया छन्।
staining त्यहि सामाग्री देखि व्यञ्जन सहित, धातु वस्तुहरु प्रयोग गर्न सक्दैन।
नीलो-कालो कपाल को लागि, आफ्नो दाहिने "लगाउने" गर्न उपयुक्त? सुझाव र चाल
कस्तो राम्रो कपाल क्लिपर? व्यवसायि, विशेषताहरु र सुविधाहरू समीक्षा
बाल क्लिपर। कसरी चयन गर्न
महिला फैशन सैलुन "मौज"
छोटो कपाल मा एक रोटी कसरी बनाउने?
आकर्षक पालकी डज Avenger
आफ्नै हातले घरमा जेल मनका कसरी बनाउने?
खमीर आटा कसरी भंग गर्न: सुक्खा र जीवित। ड्राई खमीर कसरी भंग गर्न: सुविधा र व्यञ्जनहरु
हङकङ पर्यटकहरुका लागि आकर्षण-lures
रेस्टुरेन्ट "शाही" (Orenburg) - रोमान्टिक मिति र विवाह को लागि एक आदर्श स्थान
जैकेट Conso। ग्राहक समीक्षा
किन पहेलो पाइन? किरा पाइन। सुई रंग
आफ्नै हात ढाँचा पोशाक निर्माण गर्न, ट्रयापिज
तिनीहरूलाई गर्न समय छ? तपाईं को रूप मा छैन भनेर 10 अचम्मको लक्षण
कसरी केबल मार्फत रूटर गर्न राउटर जडान गर्न? नेटवर्क "राउटर-राउटर"
ब्राजिलियन मिडफिल्डर Zhoze Maurisio